Vatengi vanoda zviri nani kuendesa mamiriro pavanotenga online | ECommerce nhau
Eva maria Rodriguez | | Kununura uye kutsvaga
MetaPack yakafumura zvabuda mukudzidza kwayo kwevatengi. Chidzidzo Sarudzo yeMutengi Yekutumira: Iyo Nyika yeE-Commerce Dhirivhari yegore ra2015 yaburitsa pachena kuti vatengi veUS neEuropean vanoda mhando dzakawanda dzekuendesa dzavanosarudza kubva, hukuru hwekutakura, uye ruzivo rwakanangana nekutakura
Ichi chidzidzo chinoburitsa Vatengi vanotarisira vatengesi vepamhepo kuti vape zvinyore uye zvakasarudzika sarudzo dzekuendesa dzinoenderana nezvinodiwa zvehupenyu hwavo hwakabatikana.. Zvinoenderana neongororo nyowani neKutsvagisa Izvozvi yeMetaPack, mutungamiri wepasi rese muElectronic Commerce, vatengi havazeze kurega kutenga pamhepo kana sarudzo yekusvitsa yavanoda isipo.
Mhedzisiro yechidzidzo pa Sarudzo yeMutengi Yekutumira: Iyo Mamiriro Ekutumira mukati Electronic Commerce yegore ra2015 MetaPack inosimbisa iro rinowedzera kukosha iro dhirivhari inotamba mukukanganisa sarudzo yevatengi kana uchisarudza chitoro chepamhepo
Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu vakuru zviuru zvitatu zvakaongororwa (3.000%) zvinoratidza kuti vakatenga zvinhu kubva kune mumwe mutengesi pane mumwe nekuti nzira dzekuendesa dzakapihwa dzaiyevedza uye 66% vakati havana kufunga kubhadhara mari yakawanda kuti vawane imwe. sarudzo.
"Izvi zvinoratidza pachena kuti maEcommerce ma maneja anoramba achingotarisa chete pakuita shanduko kune kugona kwewebhusaiti arikushaya mukana unooneka pachena uye wakakosha wekutyaira kushandurwa: kupa masevhisi ekuendesa anosangana nezvinonetsa uye zvemunhu wese mutengi"akadaro Kees de Vos, Chief Product uye Marketing Officer kuMetaPack.
1 Vatengi vanhasi havazeze kusiya zvekutenga kana sarudzo dzekuendesa dzisingagutsi.
2 Chitoro chekutora ndicho chinonyanya kufarirwa mushure mekuendeswa kumba
3 Chiitiko chekuendesa chine chinokanganisa kuvimbika kwevatengi
4 Vatengi veSpanish neNorth America ndivo vanonyanya kuda
5 Mutengo, kumhanya, kana pa-nguva kuendesa - chii chakanyanya kukosha kune vatengi?
6 Nzira dzakasiyana dzekuendesa dzinokwezva vatengi
7 MetaPack Yekudzidza Zvakakosha zveSpain
Vatengi vanhasi havazeze kusiya zvekutenga kana sarudzo dzekuendesa dzisingagutsi.
Vanopfuura hafu (51%) yevatengi vanosimbisa kuti havasati vapedza odha yekutenga nekuda kwekutadza kutakura sarudzo, vachidonongodza, pakati pezvimwe zvikonzero, kuti kuendesa hakugone kuvimbiswa kune rimwe zuva (30%) kana kutora nguva.
Uyewo, 76% yevatengi vakatarisa sarudzo dzekudzosa dzemutengesi vasati vaisa odha, uye 51% vakati havana kuenderera nekutenga nekuti nzira yekudzosa yakapihwa yanga isiri nyore kana kugadzikana kwavari.
Panyaya yezvinotarisirwa nevatengi kubva kune vatengesi vepamhepo, 83% vakati vaida akataura zvakajeka sarudzo dzekuendesa pane peji yechigadzirwa pachayo. Uye kana zvasvika pakunakira, 86% yevatengi vanoda kuendesa nekukurumidza uye 83% vakati ivo ikozvino vanotarisira kuve nezuva rekuvimbiswa rekuendesa. Mumwezve 80% anoramba achiti ivo vanotarisirawo kupihwa vhudzi.
Chidzidzo ichi chakaitwa online pakati pe3.000 vakapindura muUnited States, United Kingdom, Spain, France, Germany neNetherlands kuti vanzwisise kudiwa kwevatengi pakutenderedza. Mhedzisiro yacho inoratidza kumwe kusiyane kunonakidza kwezvaitarisirwa maererano nekutakura pakati pevatengi veEuropean neNorth America
Chitoro chekutora ndicho chinonyanya kufarirwa mushure mekuendeswa kumba
Kana zvasvika kune huwandu hwesarudzo dzekutakura dzinoshandiswa, vatengi vemazuva ano vanoshandisa huwandu hweshumiro mukuwedzera kune dhirivhari yekumba, inoramba ichizivikanwa pasi rese nevatengi vese; 90% yevakapindura vakashandisa iyi sarudzo mumwedzi mitanhatu yadarika.
Chitoro chekutora chakapfuura runyorwa rweimwe nzira dzekuendesa kumba, uye ndiyo inonyanya kufarirwa nevatengi vanobva kuUK (47%) uye US (33%). Kuendeswa kuchitoro chemuno kana nzvimbo yekuunganidza yaive yechipiri inonyanya kufarirwa sarudzo - kunyanya kune 48% yevatengi veFrance - chete 17% yevatengi veNorth America vanosarudza kushandisa iyi sarudzo.
Kusiyana, kuendesa kumabasa kunonyanya kufarirwa nevatengi veSpanish (14%) nemaGerman (12%), asi kashoma kuti ishandiswe nevatengi muFrance (6%) neNetherlands (9%). Chekupedzisira, kutumira zvinhu, kunyangwe iri sarudzo isinganyanyo kuzivikanwa pakati pevatengi muEurope neUnited States, inosarudzwa ne20% yevatengi kuGerman, avo vakati vakashandisa sevhisi mumwedzi mitanhatu yadarika.
Chiitiko chekuendesa chine chinokanganisa kuvimbika kwevatengi
Nenzira iyi, Vatengi veSpanish ndivo vanoregerera zvishoma. Chiitiko chisina kunaka chekuendesa chinogona kudzivirira vatengi kushandisa mutengesi zvakare. Vanopfuura hafu yevatengi veSpanish (51%) vaisazotenga kubva kumutengesi zvakare mushure mekushaya ruzivo uye ndivo vangangoparadzira kusada kwavo kuburikidza nehukama hwemagariro. Uye zvakare, 52% yevakapindura veSpanish vanosimbisa kuti vakashandisa masocial network kugovana zvakashata
Saizvozvowo, vatengi veGerman (49%), Chirungu (49%) uye maDutch (47%) havangashandise mutengesi zvakare mushure mekushaya ruzivo rwekutakura. Mukuenzanisa, chete 36% yevatengi veFrance uye 38% yevatengi veNorth America ndivo vangasarudza kubvisa kuvimbika kwavo kumutengesi wepamhepo.
Vatengi veSpanish neNorth America ndivo vanonyanya kuda
Vatengi vanoda kuziva chimiro chemodha yavo pamhepo, ne88% yevose vakapindura vachisimbisa kuti vanovimba neemail kana maSMS ekuzivisa kufambira mberi. Kuziva zviri kuitika nemirairo yako kwakanyanya kukosha kune vatengi muSpain (92%), United States (91%) neGerman (91%).
Vatengi muSpain neUnited States vari kunyanya kushingaira mune izvi, ne18% uye 22% zvichiteerana vachiongorora chimiro cheodha yavo kana kana zvakapetwa.
Mutengo, kumhanya, kana pa-nguva kuendesa - chii chakanyanya kukosha kune vatengi?
Nezve kuendesa pekutanga, Vatengi vanhasi vanoda kugona kurongedza kuendesa kwavo kuzadzisa zvido zvako zvinoenderana nekutenga kwega kwega kwavanoita. Naizvozvo, nepo kuendesa nekukurumidza kuri pamberi pevane makumi masere nevasere vakapindura, 86% vakati vaizomira kwenguva yakareba kana zvinhu zvavakatenga zvisina kudhura. Zvichakadaro, kugona kuvimba nemutengesi kuti aunze pavanoti vanozounza chinhu chakakosha pane chetatu (78%) chevose vakapindura.
Kutengeswa kwemutengo wakaderera chinhu chakakosha kune 49% yevatengi veUK uye 47% yevatengi veUS. Kunyangwe vatengi veDutch vasingatarise hanya nezve yakaderera-mutengo kuendesa, kumhanyisa kwekutakura kunochinja kuve chinhu chakakosha kwazvo. Kuenzaniswa ne16% yevatengi veChirungu, 30% yevatengi veDutch vakati ndiyo inonyanya kukosha.
LVatengi veSpanish neDutch vane tarisiro yakakwira kumutengesi kuti aendese pane zvaanovimbisa. 38% yevatengi veSpanish uye 34% yevatengi veDutch vakati ndiyo yakanyanya kukosha pane yakawanda yekutenga kwavo pamhepo.
Nzira dzakasiyana dzekuendesa dzinokwezva vatengi
Kana vakabvunzwa kuti ndeapi masevhisi ekuendesa avanosarudza kushandisa mune ramangwana, pakanga paine chishuwo chidiki chekudonhedza-sevhisi mutangi remotokari yemutengi. Sarudzo yacho yaingokwezva kune 7% yevatengi veUS uye 8% yevatengi veFrance. Iyo inonyanya kuziviswa dhoni yekuendesa nzira yakaunganidza zvishoma buzz, kunyanya neUS (10%) uye veGerman (8%) vatengi.
Kuendesa zvigadzirwa kubhokisi rakachengeteka kunze kwemusha wavo yakazove pfungwa yekukunda ye 21% yevatengi veUS, apo kuendesa kune rakachengeteka bhokisi hofisi yaive yakakurumbira sarudzo kune veGerman (15%) neSpanish (11%) vatengi. Zvichakadaro, kunhonga kubva kuchiteshi chechitima kwakazove kunonyanya kukwezva vatengi veFrance (13%).
MetaPack Yekudzidza Zvakakosha zveSpain
Nezve iyo data inoreva eCommerce muSpain, inotevera data inomira:
78% yevakapindura veSpain vakati vakatenga zvigadzirwa kubva kune mumwe mutengesi pane mumwe nekuti zvaipa zvimwe zvekuendesa
59% vakabhadhara zvimwe zvigadzirwa nekuti sarudzo dzekuendesa dzaive nani kana kupfuura
69% yevatengi veSpanish havasati vapedza odha repamhepo nekuti kuendesa kwaidhura
Dhirivhari yemahara yakakosha kune vatengi veSpanish kupfuura mune chero imwe nharaunda yakadzidzwa (96%)
Vatengi veSpanish (78%) ndivo vechipiri kugutsikana mushure meUnited Kingdom, yekumirira kwenguva yakareba kuendeswa kwezvigadzirwa zvavo kana zvakachipa
88% yevatengi veSpanish vaizotenga zvimwe kubva kumutengesi izvo zvaive nyore kudzoka maitiro
Iyo infographic pazasi inoratidza iyo data kubva kuchidzidzo ichi nenzira yakajeka uye inonzwisisika nzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Logistics » Kununura uye kutsvaga » Vatengi vanoda zviri nani kuendesa mamiriro pavanotenga online
8 pa10 vatapi venhau veSpain vanotenda kuti vezvenhau vakarasa kutendeka